Salai Dokhar: Pyithu Hluttaw Palai I Cuh Ve Dingin Saduhthahnak Aruang (9) – Chuncha News
Salai Dokhar: Pyithu Hluttaw Palai I Cuh Ve Dingin Saduhthahnak Aruang (9)
Pyithu Hluttaw Palai I Cuh Ve Dingin Saduhthahnak Aruang (9) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသည့် အကြောင်းရင်း (၉) ချက် 1. Hluttaw lam zulhin ramrian chankhat hnu chankhatarak ttuantu cozah le nihin kan cozah Hluttaw hna nih an ttuanchuahmi pawl kha Chin mipi nih kan duhmi le kan herhmi bangtuk asi tthan khawhnak ding caah tuah tthan ka duh. ၁။ တိုင်းပြည်အပြောင်းအလဲကို ဖော်ဆောင်ရန် လွှတ်တော်လမ်းကြောင်းမှ ကြိုးပမ်းနေသည့် ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရ၊ လက်ရှိအစိုးရနှင့် လွှတ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ချင်းပြည်သူများ၏ လိုလားချက်များ၊ ဆန္ဒများနှင့် ထပ်တူကျမှုရှိလာရန် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်လိုခြင်း။
2. Hluttaw lam cuadaihnak in ram thlennak tuahnak hmunasi i Hluttaw nihasermi phung le phai biatung hna nih mizapi caah rang deuh in tthahnemnakachuah pi ding asi caah Hluttaw palai pakhat dirhhmun in rian tuan ka duh. ၂။ လွှတ်တော်လမ်းကြောင်းမှ တိုင်းပြည်အပြောင်းအလဲဖော်ဆောင်ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်း ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်မှဖော်ဆောင်သည့် ဥပဒေ၊ မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးသည် ပြည်သူများအပေါ် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုခြင်း။ 3. Hluttaw lam zulhin rian ttuannak cu nihin Myanmarram ramrian kongkau ah caan sauahmun dingmi thlennak tuah khawhnak caah aa tlak bikmiasi. ၃။ ရေရှည်တည်တံ့သည့် အပြောင်းအလဲဖော်ဆောင်ရာတွင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအရ လွှတ်တော်လမ်းကြောင်းသည် အသင့်တော်ဆုံးတော်ဆုံးဖြစ်နေခြင်း။
4. Hluttaw cu phung ning tein mipi awan langhter khawhnak le phung ning tein mipi aiawh in chimrel khawhnak caahangan bikmi leabiapi bikmi hmunasi. ၄။ လွှတ်တော်သည် ပြည်သူ့အသံတရားဝင်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားတရားဝင် ပြောဆိုခွင့်ရှိသည့် အကြီးမားဆုံးနေရာနှင့် အထိရောက်ဆုံးနေရာဖြစ်ခြင်း။ 5. Hluttaw cu mipi duhmi le herhmi vialte nawl ngeitu cozah nihatheih ding in chimrel khawhnak hmun le nawl ngeitu cozah an fel le fel lo zohfelnak caahattha bikmi hmunasi. ၅။ လွှတ်တော်သည် ပြည်သူများလိုလားချက်ကို အစိုးရအဖွဲ့သိရှိအောင် ဖော်ထုတ်ပြောဆိုနိုင်ရန် အကောင်းဆုံးနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ကို ထိန်းကျောင်းရန် အသင့်တော်ဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးနေရာ ဖြစ်ခြင်း။ 6. Hluttaw hmun cu ramrian ttuannak ah i tel ve awkasi lomi ralkap, nuhrin covo he aa tlaak lomi zulhphung,aningcang lomi uknak phung le Federal Democracy phung he aa kalhmi zulhphung hna kha phung ning tein thlennak le remhnak caahatha bikmi hmunasi.
၆။ နိုင်ငံရေးမှာ မပါဝင်သင့်သည့် တပ်မတော်ပါဝင်မှု၊ လူအခွင့်အရေးနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်ဥပဒေများ၊ စနစ်မကျသည့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များ၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို ဆန့်ကျင်သည့်မူဝါဒများကို တရားဝင်လမ်းကြောင်းဖြင့် အပြောင်းအလဲလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ခြင်း။ 7. Pyithu Hluttaw hmun cu thlen ka duhmi thil ka thlen khawhnak ding caah le chimrel ka duhmi kong ka chimrel khawh venak ding caah aa tlaak bikmi hmunasi. ၇။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် ကျွန်တော်ဖော်ဆောင်လိုသည့် အပြောင်းအလဲများကို ဖော်ဆောင်ရန်နှင့် ပြောဆိုတင်ပြရန်အတွက် မှန်ကန်သင့်မြတ်သည့်နေရာ ဖြစ်ခြင်း။ 8. Chin ram chungah ramrian umtu ning le ramrian kongkau ah kan khuaruah ning hi thlen ka duh. ၈။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များကို ပြောင်းလဲ စေလိုခြင်း။ 9. Kum 2020 kawl ram pumpi thimnak ah teinakaco i cozahasermi phu nih kum5chung (2025 tiang) mipi caah an ttuanmi rian cuathiang i mipi caahatthahnem miasi khawh dingah keimah pumpak hrimhrim nih Hluttaw ah itel in riantuan ka duh.
၉။ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည့်အဖွဲ့က ၅ နှစ်အတွင်း (၂၀၂၅ ခုနှစ် အထိ) ပြည်သူအတွက် အမှန်အကန်အကျိုးပြုပြီး သန့်ရှင်းသောအစိုးရ ကောင်းမွန်သောအစိုးရအဖွဲ့ ဖြစ်လာရေး အတွက် လွှတ်တော်လမ်းကြောင်းပေါ်မှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ထိန်းကျောင်းပေးလိုခြင်း။ A cungah ka langhtermiaruang (9) hi cherhchan in mipi caah tthatnak chuahpi khotu dirhmun in pum i peek ka duh caah hluttaw lam hi i thim in 2020 ram pumpi thimnak ah Independent in palai i cuh ve kaa timhnakasi tiah mi zapi sinah toidornak he thawng kan thanh hna. အထက်ပါ အကြောင်းရင်း (၉) ချက် များကြောင့် ပြည်သူများအတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်စေမည့် အလုပ်ကို တတ်စွမ်းသမျှ၊ ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ အသုံးပြုပြီး အသုံးတော်ခံခွင့်နှင့် ဆောင်ရွက်ပေးခွင့်ရရှိနိုင်ရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တသီးပုဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများကို လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။ Upatnak he, လေးစားစွာဖြင့် Salai Dokhar (ဆလိုင်း ဒိုခါရ်) Email: dokharbhrin@gmail.com Phone: 09260594785
Lungthin Tak In DASSK A Daw Tak Tak Mi Nih Cun CNLD Mee Pe Uh.
Chin State Le Kawlram Pumpi Huap In NLD Party Kha Mee Rak Pe Ko Hna Uh